103 စကားစုသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်မြတ်နိုးမှုတိုးပွားစေပြီးသူမကိုထပ်မံအနိုင်ရခြင်း။ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ပထမ ဦး စွာသတိရပါ ဤစကားစုကိုသင်၏ရည်းစားသို့မဟုတ်သင့်ရည်းစားသို့ပြောပါ သူတို့ကိုသင်အမှန်တကယ်ချစ်ကြောင်းသူတို့သိစေရန်မလုံလောက်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုတည်မြဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်နှင့်သူတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသမျှကိုပြောရန်ခွင့်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေပြင်ကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤစကားစုများသည်ထွက်ပြေးရန်၊ လမ်းလျှောက်ရန်၊ ရင်ခုန်စရာနေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာသို့မဟုတ်သူအားပျော်ရွှင်စေမည့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်သင့်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့အရာအားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါ။ ပြီးတော့စာပိုဒ်တိုများဟာသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အားသာချက်အားလုံးကိုရရှိနိုင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ်လာတာကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအားစိုက်ထုတ်မှုအနည်းငယ်ကသင့်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ ရှုံးနိမ့်သူအတွက်ပေးထားပြီးဖြစ်ပြီ၊ အခုဆိုရင်သင်သိပြီ၊ အလုပ်ထဲဆင်းပါ၊ အဆင်သင့်ပြင်ပါ သူသို့မဟုတ်သူမ၏နှင့်အတူအထူးအခိုက်.
အောက်တွင်သင့်အားသင့်အားအချိန်တန်အသုံးပြုရန်အလွတ်ကျက်ရန်အကြံပြုထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြင့်စာရင်းကိုပြပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သဘာဝသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သူတို့ကိုဘယ်သောအခါမျှအတင်းအကျပ်မပြုလုပ်ရပါ၊ အချိန်ကောင်းနှင့်အချိန်တန်သောအခါမှသာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအထူးအရာတစ်ခုခုဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေလိမ့်မည်။
နောက်ထပ် ado မရှိရင်မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်မြတ်နိုးစေဖို့အကောင်းဆုံးစကားစုအချို့ကိုငါတို့ပြသနေသည်။
“ သူတို့ခိုးတာမှားတယ်၊ နင့်နင့်နင့်နင့်နင့်နင
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အသွင်အပြင်ဖြင့်စတင်သည်။ စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်ပြောဆိုခြင်း၊ ၎င်းသည်နမ်းခြင်းနှင့်ခံစားလိုက်ရပြီးမျက်ရည်ကျကာပျောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
"မင်းကိုငါချစ်တယ်၊ မင်းဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ၊ ငါ့နှလုံးသားကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ"
တချို့ကငါရူးနေတယ်၊ ​​တချို့ကငါရူးနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူး
"တကယ့်ကိုaည့်ခန်း ... ပြီးတော့ငါကအစားအစာကိုစားနေတယ် "
ငါ့ရွှင်လန်းခြင်းအမှုကားအဘယ်သူနည်း။ ငါဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်အလိုဆန္ဒ? ဒီကဗျာလေးကဘယ်သူလဲ။ မင်းအတွက်ငါ့ဘဝ
မင်းအာကာသယာဉ်မှူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလနဲ့ကြယ်ကြားမှာငါရှိနေတာပဲ "
"တခါတရံမှာငါတို့ချစ်သောသူကိုဖက်ပြီးနမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မပေးနိုင်ဘူး ...။ သူတို့ဆီကိုပို့ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပဲရှိတယ်၊ အဲဒါကနေ့တိုင်းခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုအကျဉ်းချုံးထားတယ်"
သူငယ်ချင်းတချို့ကအရက်ကိုသောက်တယ်၊ တချို့ကမြက်ပင်သောက်တယ်၊ ဝိုင်တွေသောက်တယ်၊ ငါလည်းမင်းရဲ့အရသာကိုသာရရှိသည်
“ ဒီမှာငါနဲ့အတူမရှိတော့တဲ့ငါ့ရဲ့နှလုံးသားကိုငါစေလွှတ်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေချင်လဲလို့သူမေးခဲ့တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပြင်းထန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အိပ်မက်ခြင်းများမှတဆင့်ငါနှင့်အတူကခုန်ပါ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဲ့သို့အရသာတူသောအတူတကွကခုန်ပါ
မင်းကိုနမ်းတာကအချိန်ကုန်၊ အာကာသလမ်းကြောင်းပျောက်သွားသလို၊ ကောင်းကင်၊ ကြယ်တွေမြင်ရသလိုပါပဲ။
"သင်ဝေးလေလေသင့်ကို ပို၍ စဉ်းစားလေလေ၊ သင့်ကိုစဉ်းစားလေလေ၊ သင်ပိုမိုခံစားရလေလေဖြစ်သည်"
"ကောင်းကင်ကလူတစ်ယောက်ကသူ့လက်ထဲမှာစာလုံးနှစ်လုံးနဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။ တစ်ခုကမင်းကိုငါချစ်တယ်၊ နောက်တစ်ခုကမင်းကိုငါချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ပဲ"
“ လရဲ့အလင်းကကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုထွန်းလင်းစေတယ်လို့ပြောကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလင်းစေတယ်”
“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်စိကိုတဆင့် ဝင်၍ နှလုံးကိုနွေးစေသောနေနှင့်တူသည်၊ ထူးခြားသောဖွင့်ဟချက်တစ်ခုကဲ့သို့အမြဲတမ်းပေါက်ကွဲတတ်သည်”
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုပုန်းကွယ်စေနိုင်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝရန်အတွက်စာပိုဒ်များ "
"ဘ ၀ ၌နာကျင်မှုများစွာရှိသော်လည်းသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းနည်းမှုများလျော့နည်းသွားသည်"
"ငါ့ဘဝမှာဘဝမရှိ၊ ငါ့ဘဝမှာအလင်းမရှိဘူး၊ ငါ့ဘဝမှာတစ်ယောက်ယောက်ပျောက်နေတယ်၊ ​​တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းပဲ"
"မင်းဟာမင်းမရှိရင်ငါလုံးဝမှောင်မိုက်နေတယ်။ မင်းဟာငါ့ဘဝရဲ့နေဖြစ်တယ်။ မင်းမရှိရင်အရာအားလုံးဟာအသက်ရှင်မှုမရှိဘဲ"
“ မင်းဟာနှလုံးသားထဲကလူတစ်ယောက်ပဲ။ မင်းနဲ့ငါပါ။ ”
"မင်းကနူးညံ့သောကောင်းကင်တမန်၊ ငါ့နှလုံးသားကိုနွေးထွေးစွာချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ လှပသောနူးညံ့သောသတ္တဝါ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်လမ်းကြောင်း၊ အမြဲတမ်းခိုလှုံရာတစ်ဝက်"
"မင်းကငါ့ရဲ့အိပ်မက်ပါ။ မင်းကငါ့ရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားပါပဲ။ မင်းဟာငါ့နှလုံးသားထဲကနှင်းဆီတစ်ပွင့်ပါ။ "
“ မင်းဟာအရမ်းချိုမြိန်တယ်၊ ငါ့ရဲ့အဖိုးတန်ပါ၊ မင်းနဲ့အတူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်”
မင်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးငါဟာမင်းဘဝမှာရှိနေမှာပါ။ ငါထွက်သွားလျှင်နောက်တဖန် ပြန်၍ မလာရ။
“ မင်းကငါနဲ့ဝေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုငါသိတယ်၊ ငါ့စိတ်ထဲမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှမင်းကိုမဖျက်နိုင်ဘူး၊
"ငါအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲနေတယ်၊ ​​တွက်ချက်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ မင်းနဲ့အတူရှိနေရင်ငါအေးလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုထိလိုက်တာငါအရည်ပျော်လိမ့်မယ်"
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာစကားစုများ: ငါ့ဥယျာဉ်ထဲကပန်းတွေနွေ ဦး ရာသီမှာပွင့်တယ်။ မင်းကိုချစ်တဲ့အချစ်ကငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပန်းပွင့်"
သေခြင်းကိုကြောက်တဲ့သူတွေများတယ်၊ နာကျင်မှုဝေဒနာကိုကြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်၊ ငါကြောက်ရင်တော့မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆုံးရှုံးသွားစေခြင်းပဲ။
"မင်းငါ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ၊ ငါကြည့်ရတာမရပ်နိုင်ဘူး၊ မင်းကမင်းကအရမ်းစုံလင်တဲ့အတွက်မင်းကိုတောင်မေ့လို့မရဘူး"
ထုံးကိုအစိမ်းရောင်ဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်၊ အချိန်သည်ရင့်ကျက်သည်။ ငါ့နှလုံးသားဟာလွတ်လပ်စွာမွေးဖွားလာခဲ့ပြီးမင်းကမင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ် "
"အလှဆုံးသောစကားလုံးများ၊ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်ကဗျာ၊ ငါနင့်ကိုချစ်သောရိုးရှင်းလှသည်"
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှပဆုံးအရာကတော့မင်းနဲ့ငါနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဘ ၀ မှာအလှပဆုံးအရာက ... ငါနင့်ကိုငါနဲ့အတူနေတယ်။ ငါမျှဝေသည့်အလှဆုံးအရာသည်ငါနှင့်အတူနေထိုင်သည်။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအလှဆုံးအရာက ... ငါနဲ့မင်းကိုချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ "
"သက်ပြင်းချခြင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားလုံးများဖြင့်မဖော်ပြနိုင်သောအရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်"
“ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသင့်ကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေ၊ သင့်ကိုမကြည့်ဘဲမကြည့်ဘဲသင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုငါသဘောကျတယ်”
“ မင်းကိုငါထွက်ပြေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုမတွေ့တဲ့ ၅ မိနစ်သာကြာတဲ့အခါမင်းကိုငါစိတ်ထဲမဖယ်ရှားနိုင်ဘူး”
"မင်းကိုတွေ့ဖို့ငါ့ရဲ့မျက်လုံးတွေ၊ မင်းကိုဖက်ဖို့ငါ့လက်တွေ၊ မင်းကိုချစ်ဖို့ငါ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့မင်းကိုချစ်ဖို့ငါ့နှလုံးသားတွေ"
"ငါ့မျက်လုံးတွေစိမ်းနေတယ်။ မင်းကအညိုရောင်၊ မင်းကငါချစ်တယ်မင်းမသိဘူး"
လူများစွာကသူတို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေ၊ အခြားအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းအနားမှာရှိနေတုန်းပရဒိသုကိုငါသာသိတယ်
"မိန်းကလေး၊ မင်းဟာမြှောက်ခြင်းဇယားထက်ပိုကောင်းတယ်။ "
"ငါရေမလိုချင်ဘူး၊ ဖန်ခွက်မလိုချင်ဘူး၊ မင်းရဲ့အရသာရှိတဲ့ပါးစပ်ကနမ်းချင်တယ်"
"ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းမရှိရင်ငါဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာမသိဘူး"
“ နင့်ကိုနမ်းဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းအိပ်မက်မက်တဲ့အခါငါခံစားရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုငါသိတယ်”
“ မင်းမှာအိမ်ထောင်ဖက်ရှိမရှိငါမသိဘူး၊ မင်းမှာယောက်ျားရှိသလားမသိဘူး၊ ငါမင်းကိုဘုရားသခင်ကသင့်အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုလုပ်ပေးတာကိုမင်းသိစေချင်တယ်”
"မိုးတိမ်ရွာနေပြီ၊ မိုးရွာတော့မယ်။ မင်းကိုငါမမြင်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာ၊
"ငါခြင်ဖြစ်ချင်တယ်၊ အခန်းထဲဝင်ပြီးငါသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်။ "
"နင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာငါနမ်းနေတုန်းပဲ" သူတို့ကိုပြန်ယူလို့ရမလား "
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မိုက်မဲလျှင် လူမိုက်တို့အသက်ရှည်ကြလော့။ "
“ မင်းကိုငါ့ကိုခေါ်ရင်မင်းပြန်တွေ့ချင်လို့ပါ၊ ငါ့ကိုခေါ်ရင်မင်းကမနေ့ကနဲ့တူလိမ့်မယ်၊ မင်းငါ့ကိုဖုန်းဆက်ရင်မင်းငါ့ကိုဘာထင်လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပါ၊ မင်းငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ရင်ပြောပါ ဦး၊ ငါမရှိရင်မင်းအသက်မရှင်တော့ဘူး။ ကျေးဇူးပြု။ ငါ့ကိုခေါ်ပါ"
"မင်းကိုချစ်တာဟာရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဟာလူလိမ်တစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါဝါကျတစ်ခုစီကိုပေးမယ်၊ မင်းကိုငါထာဝရထာဝရချစ်လိမ့်မယ်"
သင်၏အသားအရေကိုကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခမ်းများရှေ့တွင်တုန်ခါနေစေပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုစည်းချက်ညီစွာလှုပ်ရှားသွားစေပါ၊ စိတ်ကိုမေ့မေ့လျော့လျော့ပျောက်စေပါ၊ ငါနှင့်အတူစိတ်အားထက်သန်သောလမ်းများလျှောက်ပါ။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအိပ်မက်များ၊ ပျော်ရွှင်မှုအိပ်မက်များနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှု၏အိပ်မက်များ၊ သင်၏နူးညံ့သောနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုခံစားရသည့်ထာဝရပျော်ရွှင်မှုအိပ်မက်များ၊ မင်းအိပ်မက်တွေ ...
"ငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏တိတ်ဆိတ်စွာတီးတိုးကျွန်ုပ်လက်များသည်သင်၏အရေပြားကိုထိသည်။ ငါ၏အသားအရေ၊ မင်းမျက်လုံးများမှမျက်ရည်များစီးကျလာသည်။ ငါ့ဆန္ဒကမင်းဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်"
"မင်းနဲ့တွေ့ဖို့တစ်နာရီကြာပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုမေ့သွားဖို့တစ်သက်လုံးအချိန်ယူရ ဦး မယ်"
"ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားမယ်၊ မင်းကိုငါကြားနိုင်ပေမယ်၊ နေရာတိုင်းမှာနေလို့မရဘူး၊ ငါနှလုံးသားထဲမှာငါနဲ့အတူအမြဲတမ်းသယ်ဆောင်သွားမှာပါ"
"ငါမျက်လုံးတွေကိုပိတ်ထားရမယ်၊ မျက်စိကန်းအောင်မြင်ရလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့နူးညံ့ကြင်နာမှုပုံရိပ်ကိုသာသတိရနေမှာပါ။ မင်းရဲ့လှပမှုအားလုံးကိုအတွေးထဲမှာသိမ်းဆည်းထားသင့်တယ်၊ ငါ့ကိုမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေတဲ့အလင်းရောင်ထက်မကမြင်သင့်တယ်။ အချစ်ဇာတ်လမ်းများ "
"မင်းရဲ့လက်တွေငါ့ကိုသိတယ်၊ ငါ့ကိုနားလည်တယ်၊ ငါ့ကိုထိတယ်၊ နူးညံ့စေတယ်၊ ​​ငါ့ကိုသယ်ဆောင်တယ်။ ငါ့ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာငါ့ကိုမထိခြင်း၊
"မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကငါ့ကိုလုံးဝရူးသွပ်စေတယ်။ မင်းရဲ့အပူတပြင်းခန္ဓာကိုယ်ကငါ့ကိုရှိတယ်။ မင်းကိုတွေ့ရတိုင်းမင်းကငါ့ကိုပိုချစ်လာတယ်"
"မင်းမျက်လုံးကိုကြည့်ကြည့်မိနစ်တစ်ချက်၊ မင်းလက်တွေကမင်းရဲ့အရေပြားကိုနမ်းနေတုန်း၊ မင်းခန္ဓာကိုယ်မှာပျော်မွေ့စရာတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်တိတ်ဆိတ်စွာ"
“ မင်းကိုငါနဲ့မင်းမလုပ်နိုင်တာတစ်ခုနဲ့ငါလုပ်မယ်၊ မင်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုချစ်ပြီးဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး”
"မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပဲငါနင့်ကိုစားမှာပါ၊ ငါ့ရဲ့အစားအစာကငါတို့ရဲ့အနမ်းတွေပဲ၊ မင်းရဲ့လက်ချောင်းတွေအားလုံးကိုလေကောင်းလေစွ၊ ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကမင်းရဲ့မျက်လုံးပုံရိပ်၊ အနားအနားကမင်းအနားမှာအိပ်ဖို့ပါ"
"ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့နာမည်ကမင်းမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကျန်နေမှာသေချာတယ်။ တကယ်လို့အချစ်ဟာနောက်ဆုံးမှာသေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ငါရပ်တန့်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်"
"ပြီးတော့ငါပြောတိုင်း" ငါမလိုချင်တော့ဘူး "လို့ငါပြောနေတာဟာငါအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လိမ်ညာမှုကြီးကိုနားလည်တယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေပြီးသူမကိုထပ်မံအနိုင်ယူဖို့အတွက်စာပိုဒ်တို ၁၀၃ ခု
မာရီယာ Isabel ဟုသူကပြောသည်
Maria Isabel အားပြန်ကြားပါ